Otu esi agbagide isi ụlọ ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Isi mmiri ịsa ahụ nwere obere mmiri na-emepụta, na a pụrụ itinye mgbapụta mgbapụta ma ọ bụ isi mmiri ịsa ahụ nwere ọrụ nkwalite na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na emeghe valvụ ntinye mmiri dị ntakịrị, isi mmiri ịsa ahụ nwere obere mmepụta mmiri. N'oge a, ọ dị mkpa ka e meghee valvụ ntinye mmiri nke ukwuu, na n'ihi usoro ntinye nke isi mmiri ịsa ahụ, ọ ga-emekwa ka isi mmiri ahụ nwee obere mmepụta mmiri, ya mere jide n'aka na o doro anya .
Ma enwere ike iji isi ịsa ahụ mee ihe nke ọma ma ọ bụ na ọ gaghị enwe mmetụta kpọmkwem na ahụmahụ ndụ ụlọ nkeonwe. Ọ bụrụ na mmiri na-esi na isi mmiri ịsa ahụ dị ntakịrị, ịkwesịrị ịchọta ihe kpatara ya n'oge, wee mezie ya. Ị maara otú e si eme ka nrụgide nke isi ịsa ahụ dịkwuo elu na otú isi mmiri ahụ si dị ntakịrị? Ka anyị lee ọnụ ugbu a.
ihe €. Otu esi agbagide isi mmiri ịsa ahụ
aºŒ. Kedu ihe dị njọ na obere mmiri na-apụta na isi mmiri ịsa ahụ?
1. Ọ bụrụ na mpụta mmiri nke isi mmiri ịsa ahụ adịla ntakịrị, ị nwere ike iso ndị agbata obi gị nwee mkparịta ụka ka ha buru ụzọ mara ma mmiri mmiri onye ọ bụla agbadala. Ọ bụrụ otu a, enwere nsogbu na ọkpọkọ mmiri. Ịkwesịrị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ mmiri n'oge iji hapụ ya ka ọ na-ahazi ndị ọrụ dị mkpa ka ha gaa maka nlekọta iji hụ na ọ gaghị emetụta ojiji kwa ụbọchị.
2. Ọ bụrụ na mmiri na-esi na isi mmiri ịsa ahụ dị ntakịrị, lelee ma emeghere valve ntinye mmiri nke ejikọrọ na ikpo ọkụ mmiri. Ọ bụrụ na emepere ya ntakịrị, ọ ga-emetụta mmiri na-asọ. N'okwu a, naanị gbanye valvụ ntinye mmiri ma meghee ya nke kachasị. Ndị ọrụ bi n'elu ala dị elu nwere ike ịhọrọ ịwụnye mgbapụta nkwalite.
3. Ọ bụrụ na àgwà nke isi mmiri ịsa ahụ zụrụ adịghị mma, ọ ga-adị mfe imebi ihe ndị dị n'ime ya, na-eme ka nkwonkwo na-adịghị mma, na-akpata obere mmiri. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere nsogbu na nrụnye, ọ ga-emekwa ka ojiji a na-ejikarị eme ihe. Ya mere, ṅaa ntị n'ụzọ pụrụ iche na nsogbu ndị dị otú ahụ ma kpọtụrụ ndị ọrụ ụlọ na oge.
Banyere otu esi eme ka nrụgide nke isi ịsa ahụ dịkwuo elu, na otú isi mmiri ahụ si dị ntakịrị, m ga-ebu ụzọ webata ya ebe a. Ị ghọtara? Enwere ọtụtụ ihe kpatara isi ịsa ahụ ji enwe ntakịrị mmiri. Ọ dị mkpa iji nlezianya lelee ihe kpatara nsogbu ahụ, wee dezie ọgwụ kwesịrị ekwesị iji hụ na enwere ike iji ya mee ihe n'oge na-esote.
Nke gara aga:Otu esi etinye isi igwe ịsa ahụ
Osote:Kedu ụdị ụlọ ọrụ anyị bụ?